BOBs: Ary ireo mpandresy dia … · Global Voices teny Malagasy
BOBs: Ary ireo mpandresy dia …
Voadika ny 27 Jolay 2018 13:44 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, हिन्दी, বাংলা, Español, English
(Marihina fa tamin'ny 16 Novambra 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Efa niandry izany fatratra ianao. Nipetraka teo anoloan'ny solosainao ianao. Angamba nandeha fiaramanidina nankany Berlin mihitsy ianao … marina izany, Berlin, izay nanaovana ny lanonana hizaràna ny loka The BOBs (Billaogy Tsara Indrindra), ilay fifaninanana nokarakarain'ny Deutsche Welle ary notohanana niaraka tamin'ny Global Voices, ny 15 Novambra 2007. Nambara tao amin'ny lanonana ireo mpandresy – ny nahazo ny loka voalohany tamin'ny taona 2007 dia i Xenia Awimova, mpanao gazety mpaka sary mavitrika 23 taona izay mipetraka sy miasa ao an-drenivohitr'i Belarosia ao Minsk.
Manasongadina ny sarin'ny fiainana mainty sy fotsy ao Minsk sy ny manodidina ny bilaoginy, Foto-Griffaneurei (izay adika ara-bakiteny hoe “Sary-Adaladala”) .
Christian Gramsch, talen'ny Fandaharan'asa ao amin'ny Deutsche Welle dia nilaza momba ilay bilaogy hoe: “Raha fintinina amin'ny teny vitsy dia ity bilaogy mahafinaritra ity no nahavita nanoritsoritra ny fiainana andavanandron'ny olona ao Belarosia.” Nanazava ny fahombiazan'ny bilaoginy i Awimova rehefa nandre ny loka: “Tsy dia misy ny gazety tsy miankina na sehatra hafa izay ahafahan'ny olona maneho ny heviny ao Belarosia. Izany no mahatonga ny tanora maro manoratra ao amin'ny blaogin'izy ireo. “
Nomem-boninahitra tamin'ny loka Best Videoblog (Bilaogin-dahatsary tsara indrindra) ihany koa ny Alive in Baghdad, bilaogin-dahatsary malaza momba ny fiainana andavanandro ao an-drenivohitra Irakiana. Ny Valour-IT, , bilaogy iray izay manangom-bola hividianana solosaina enti-tanana ho an'ireo miaramila amerikana naratra no mpandresy tamin'ny loka Best English Blog (Bilaogy amin'ny teny anglisy tsara indrindra).
Nomena ny bilaogera iray tsy mitonona anarana Jotman ny loka Reporters Without Borders manokana, izay nanao fanangonam-baovao ny fanonganam-panjakana tao Thailandy tamin'ny taona 2006 sy ny fihetsiketsehana tao Birmania izay betsaka noho ny vaovao avy amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Ireto manaraka ireto ny lisitra feno ahitana ireo mpandresy tamin'ny loka Best of Blogs taona 2007 :
Best Weblog: Photo-Maniac
Best Videoblog (Bilaogin-dahatsary): Alive in Baghdad
Best Podcast (Rakipeo): Die Gefühlskonserve (Alemaina)
Blogwurst: Little Galerie (Frantsay)
Reporter without Borders: Jotman (Thailandy / Burma)
Best Weblog Arabo: Aljazeera Talk
Best Weblog Shinoa: Lian Yue's The Eighth Continent
Best Weblog Holandey: Frankwatching
Best Weblog Anglisy: Valour IT
Best Weblog Frantsay: Actualités de la république démocratique du Congo
Best Weblog Alemà: Behindertenparkplatz
Best Weblog Persiana: 35 Grad
Best Weblog Portiogey: Blog do Tas
Best Weblog Rosiana: /dev/karlson/mind.log
Best Weblog Espaniola: A mis 95 años
Mpisera manodidina ny 100.000 no nitsidika ny tranokalan'ny The BOBs tamin'ny ankapobeny mba hifidy ireo bilaogy tiany indrindra avy amin'ireo bilaogy voafidy maherin'ny 7.000, ka nahatonga fahombiazana goavana tamin'ity lokan'ny taona 2007 ity. Noho izany, raha bilaogera ianao, miezaha manoratra, satria herintaona latsaka dia ho avy ny loka ho an'ny taona manaraka ary afaka mandray anjara amin'izany ianao!